Izikhulu seNgeniso yesiFundazwe. engenayo wamemezela
izikhulu Revenue njalo abanesifiso abantu abavamile bayamangala, indlela benza MP imoto zemali engaphezu ruble 10 million, kulokho uthola inyanga ayizinkulungwane 50 kuphela.
Lokhu ngesikhathi lapho abantu abavamile abasebenzayo engxenyeni kahulumeni nje ngeke siphile phezu kuyikhono, okuyinto kuveza. Kepha bonke abahola impesheni ngaphandle izinyembezi ayikwazi ukukhuluma. Kungani lokhu kuqhekeka izimali phakathi izakhamuzi? Kungani izikhulu abahola asifani ne amaholo abantu abavamile?
Noma kunjalo, njengenhlalayenza, abacebile bacebe futhi abampofu - ampofu. Njalo sibona izikhulu azibonayo kubo njengoba ezonakele. Angazi ngibasole ukusola ohlelweni uqobo, okuyinto ikuvumela ukuba namukela umvuzo, babe nemali "kwesokunxele".
Ngesikhathi esifanayo simemezelo engenayo izikhulu akuyona sokulwa nenkohlakalo. Lokho kungenxa yokuthi sekuyisikhathi eside osopolitiki bethu uhlakaniphile ngafunda uhlale sibonga ahlanzekile nemindeni yabo.
Okwenza izikhulu ukugcwalisa i-income tax ukubuya?
Njengoba engena amandla yomthetho "Ngo ngobakhamuzi wokuqeda inkohlakalo," izintatheli njalo ekutholeni "namabala amnyama" ku idumela izikhulu. Kungakhathaliseki ukuthi siyakuthanda noma cha, oyiphini ophila kuphela iholo lakhe, abakwazi ukuya aphumula ngosuku lwayo zokungcebeleka ezibizayo, ukushayela izimoto ezibizayo, kanye ukuba ngumnikazi zokuhlala ezimbalwa phakathi edolobheni laseMoscow.
Naphezu kweqiniso lokuthi lesi simemezelo ishicilelwe, namanje usanethemba lokuthi ababebonisana akuyona imali yangempela esikhundleni kwezikhulu. Phela, bashonaphi uthole ezinkulu, impahla phesheya, neviyo lemikhumbi elikhulu izimoto? Kakade kudala bafunda indlela bahlelekela ibhizinisi labo amalungu omkhaya nabangane abaseduze, sesiye sivamile iyiphi eyindoda ecebile. Ngenxa yalokho, idatha esemthethweni emiholweni esikhundleni kwezikhulu ayikwazi njengomuntu onokwethenjelwa.
Kungani amalungu ePhalamende ukufihla nemiholo yabo?
Inkinga eyinhloko lamadolobha esimanjemanje Russian Federation uhulumeni Kuyaphawuleka ukuthi cishe wonke amalungu kukhona kosomabhizinisi noma musa ukumela izimfuno zabantu, kanti ezinye izigcawu ezithile. Konke lokhu kuholela yokuthi imali yangempela izikhulu sitheza umphakathi. Bengafuni umphakathi ukwazi lonke ulwazi ngezimali amaqembu ezombusazwe kanye namaphrojekthi ibhizinisi.
Yini imali phesheya?
Izikhulu ngenzuzo emhlabeni wonke lihlukile. Kwezinye kuba ezingeni kangangokuthi bayaphumelela abacebe, hhayi kuphela ngaphakathi ezweni lakubo, kodwa futhi emhlabeni wonke. Ngamanye iBhayibheli isho, inhliziyo abantu abavamile kanye komholo ojwayelekile. Kodwa noma kunjalo, izikhulu Russian izimali ephakeme kakhulu, ikakhulu lapho uqhathaniswa nezinzuzo isilinganiso abayizakhamuzi ezejwayelekile.
Futhi akukho lutho isimanga. Empeleni ngo emazweni asethuthukile ukuba olusemthethweni - ukuthi ukusebenza nje isimo zabo nabantu. Emazweni ukuthi ayakhula, ngokuba iPhini iwukuba ukufinyelela okungenamkhawulo emkhombeni yomphakathi.
Poroshenko usufikile bonke abaholi bezombusazwe ngokuya engenayo
Ngaphezu kwakho konke wathola uMongameli Ukrainian Petr Poroshenko. Ngo-2014 waba sesimweni esamsiza ukuba imali engenayo kule imali eyizigidi ezingu-6,49 aseMelika. share sengonyama it zuza ngokusebenzisa ibhizinisi layo, ikakhulukazi ngezithukuthuku inkampani "kukaRoshen", okuyinto wathembisa ukuthengisa ngokushesha emva kokhetho uma enqoba ukhetho.
Kubi uma lithintwa ukuba khona ibhizinisi imisebenzi zezombusazwe? Sekuyisikhathi eside kungase kutholakale ukuthi eziyimbangela yalokhu ukhuthaza inkohlakalo kanye ukwamukelwa of imithetho ukuthi zibalulekile unwinding imiklamo yabo ibhizinisi, hhayi ukwenza ngcono izimpilo zabahlali abavamile.
Zonke ezinye omongameli uma ziqhathaniswa Petro Poroshenko efanelwe kancane izikhathi okungenani 15.
Ukuze uqhathanise, isilinganiso amaholo Ukraine ngo-2014 zaba 3500 hryvnia ngenyanga. Ngokusho wamanje exchange rate ye currency angaphandle is US dollar kuyinto 166,67. Ngonyaka owodwa, i-Ukrainian isilinganiso wathola $ 2,000.
Obama wathola izikhathi 10 ezingaphezu kuka-American isilinganiso
Ngokwesibonelo, uMengameli waseMelika uBarack Obama lifanelwe 395.000 aseMelika. Ngonyaka odlule, wakwazi ukuthola umumo wawo kungathi izinkulungwame 100 dollar angaphezu. Ukuze Umongameli wezwe omkhulu, wathola imali engenayo eyanele, unikezwa yayo enethonya kwezombusazwe.
Ngaphezu amaholo, umongameli wase-United States uthola iholo kusukela ukushicilela indlu Dystel futhi Golderich, okuyinto uthengisa uMongameli biography.
Sikhishwe yokuthi inkokhelo isilinganiso of America zayo cishe $ 4,000 ngenyanga futhi 48.000 ngonyaka, umongameli usunificile kubo izikhathi 10 kuphela.
Angela eza on the izithende of Baraku Obame
Angela Merkel, abasebenza ngokuzikhandla kuholela EU i-Germany, nabo basebenza kanzima ngo-2014. Yena wathola kancane esingaphansi umongameli wase-United States of America - ayizinkulungwane 327,7 aseMelika.
I umhlali isilinganiso laseJalimane lithola kancane kuka-3 ayizinkulungwane euro ngenyanga, ukuze isilinganiso eseduze phakathi amazinga okuphila namaphini we wendawo ohlala eduze-United States.
Kungakanani ZUZA uMongameli waseNingizimu Afrika?
UMongameli WeRiphabhulikhi YaseNingizimu Afrika Dzheykob Zuma uthole imali ngo-2014 e inani ayizinkulungwane 227,576 US dollars. Yikuphi kuhle ucabangela futhi inkokhelo isilinganiso sabantu - e 1838 zamadola. Okungukuthi, abangabantwana isilinganiso cishe ziyefana nalezo Obama and Merkel.
Kuyadingeka ukuba acabangele yokuthi uZuma abafazi amahlanu nezingane amabili. Ukuze awondle wonke umkhaya wakhe, kudingeka ube imali okuqinile.
UVladimir Putin lathola u-Alexander Lukashenko
Ubude ayizinkulungwane 147,267 US dollars, okulingana ruble ayizigidi ezingu-7.5, wakwazi ngo-2014 ukwenza owayengumongameli waseRussia. Ngenxa kwamazinga iholo izikhulu wakwazi ukuphinde kabili ngenzuzo yayo sikhiqize inani eliphindwe kabili uma ziqhathaniswa yi ngonyaka odlule.
Njengoba ubona, uVladimir Putin uthola esingaphansi umongameli eNingizimu Afrika. Kodwa uma siqhathanisa nge komholo baseRussia, okuyinto cishe izikhathi eziyizinkulungwane ezingu-30. Ruble, ke kakhulu.
UMongameli waseBelarus ezweni lobuzalwane kungenzeka wasebenza isikhathi eside ngokwanele ngonyaka odlule, ngokusho idatha esemthethweni, ayizinkulungwane 33,873 US dollars. Omunye nesizotha kakhulu Heads of State, Lukashenko ayizange ephethwe izindlu noma ezindlini noma Villas. Akanawo ngisho imoto eyodwa.
Izimpahla umndeni kamengameli ayinakho ibhizinisi, bonke abathola iholo eliphansi. Mhlawumbe ngoba isizotha esinje nokusondelana abavamile njengawe kuye zonke Belarusians.
Izimali ezinye izikhulu ze-Russian Federation I-2014
amaholo ngokusemthethweni izikhulu kancane kancane, naphezu izikhathi esindayo kwezomnotho. Ngeshwa, abafundisi kanye odokotela ukukhulisa inkokhelo imali kwibhajethi akwanele.
Iningi zonke izikhulu Russian ngonyaka odlule, wakwazi ukuthola yangaphambili umlando uthisha Sergei Siushovu. MP Mordovia State Council kuboniswe isitatimende engenayo ngo-2014 akukho kancane, futhi ruble 6.788 billion. Yebo, akusiwona inkinga, cishe isigidi sezigidi eziyisikhombisa ruble. Ukwakhela phezu kwasiphi wakwazi ukuzuza kangaka? Ukukhiqizwa nokudayiswa zokwakha kuyisisekelo sebhizinisi. Yena uyabandakanyeka ezolimo kanye nezinye izindawo zebhizinisi. Naphezu uzuza esinjalo, kubhekwe ezisemthethweni ukuba kunalokho nesizotha futhi angekho esidlangalaleni.
UVladimir Gruzdev, ngubani umbusi Tula esifundeni, wakwazi uthole ruble ayizigidi ezingu 1,074, futhi uma sicabanga imali umndeni kuyinto ruble ayizigidi ezingu-1.7.
Lezi zinombolo akumangalisi muntu. Phakathi osopolitiki kungukuthi kuthathwe ukuba ingenzele impahla, ibhizinisi kanye nezinye izinto eziyigugu ebusweni isimo. Njengoba sishilo, ngokuvamile kakhulu imibhalo zilotshiwe amagama izihlobo.
isitatimende Income, edingekayo ukuze ugcwalise izikhulu ayikwazi walungisiswa kuze kufike ezingeni lokuthi kuyadingeka. Engingakusho nje ubhale ibhizinisi layo ngakolunye - futhi zonke kwemali yebhizinisi ithrekhi kuyoba nzima kakhulu.
Izikhulu ziye zamemezela imali akuyona ukubaluleka efanayo, lapho ungakwazi ukuzulazula, uzama sokulungisa le nkinga. I impi yokulwa nenkohlakalo kumele kwenziwe izinguquko eziningana. Ngokwesibonelo, iningi izikhulu zikahulumeni akhononde ngokuntuleka amaholo aphezulu ukuthi alikhuthazi ukudlala umdlalo ngokwethembeka. Ngenxa yalokhu, futhi kukhona isidingo kanye nokuthola izindlela lokwenza imali eyengeziwe. Kodwa ngisho imali esemthethweni boMnyango Kule minyaka emihlanu edlule kunyuke ngo izikhathi 4.5, ekwahluleleni abo entela.
Kodwa, esibonakala, lokho kubalulekile umuntu uhola ruble ezingaphezu kuka-1 million ibhizinisi labo, ngoba iholo? Inani nomholo ngenzuzo, futhi bakhokhelwa ama kusukela isabelomali isimo, lincane kakhulu, okuyinto abakwazi ngokuphelele ukushintsha isimo sengqondo olusemthethweni maqondana nomsebenzi wabo.
Okokuqala, udinga ukuhlukanisa ngokucacile phakathi kwebhizinisi kanye nokuhileleka kwezombusazwe nesekela ngamunye. Umsebenzi wakhe kuphela evimbela umsebenzi.
Okwesibili, kubalulekile ukuba toughen izinhlawulo okunhlobonhlobo ukonakala. Izinhlawulo kufanele iyayithusa labo zibonisa, ukuthatha noma cha namukela umvuzo. Futhi akufanele kuphela inhlawulo kodwa futhi bangaboshwa nokuboshwa.
Okwesithathu, isidingo sokuqinisa ukulawula umphakathi phezu imisebenzi civil izinceku, ubambe imicimbi yomphakathi lapho abantu ngeke baxoxa ngokuhlangenwe nakho kwabo kanye ukwabelana imibono.
Futhi okubaluleke kakhulu, isilinganiso somholo olusemthethweni akufanele sikhule ngokushesha kunokuba ezingeni engenayo zabahlali abavamile Russian.
Uyini ikheli lokukhokhisa of ikhadi lesikweletu?
Kuphi futhi kanjani ukutshala imali eziphezulu zenzalo?
Indlela ukugcwala "WebMoney" ukugcina: imfundo
Ivana Velikogo Bell koMbhoshongo eMoscow ezibiyele
Ngazi kanjani ukulinganisela zokuthutha ikhadi Krasnoyarsk
Yini uyaphupha intombi ukudlwengula, unkosikazi, indodakazi? Kungani iphupho lokuzama ukudlwengula?
Cologne Cathedral Germany - into UNESCO Wezamafa
Zonke izinhlobo zamakati: incazelo kanye nemvelo
Aphumule Simferopol: Izibuyekezo